Mindless zokuziphatha Nokwehluka Cultural - Amabhizinisi International
Mindless zokuziphatha Nokwehluka Cultural – Amabhizinisi International
Kudingeka sibe nomqondo ocacile ngalokho kuba Ethics kanye nomehluko phakathi izenzo kanye netinchubo yentuthuko kwebhizinisi ngamazwe ukuthi zihlobene nge zamasiko and Ethics.
Colins Dictionary sichaza Ethics njengoba izinkolelo zokuziphatha kanye nemithetho mayelana okulungile nokungalungile. An ohilela wohlobo oluthile kuyinto umqondo noma inkolelo yokuziphatha ethonya ukuziphatha, zengqondo, nefilosofi of iqembu labantu. Webster Dictionary sichaza njengendlela isiyalo ukuthi iphatha okuhle nokubi futhi nge duty zokuziphatha kanye nesibopho, nobe njengoba izimiso zokuziphatha elawula umuntu noma iqembu. Larrouse, a Dictionary French, ichaza njengengxenye ifilosofi ezigxile eziyisisekelo zokuziphatha, nobe njengoba isethi izimiso zokuziphatha ukuthi kukhona phansi ukuziphatha ubani.
Yini ephumelela nomsindo ngaphezulu ezingxoxweni zamazwe omhlaba kukhona kwezici yamasiko, okuyinto ukungaziqondi futhi kudidaniswe ukungafani Ethical.
Namuhla, ezweni ngokuphelele axhunyiwe, kungelula ukuba ube elichumayo ngaphandle kokunaka Emasiko.
Sinazo izici ezimbili ezibalulekile ukuhlaziya, ngokubaluleka Emasiko.
Owokuqala lapho ehlaziya yangaphakathi yebhizinisi imvelo, kanti eyesibili lapho thina ukwenza lokusondela imvelo yangaphandle, zendawo global, ukuze ukudayiswa imikhiqizo noma amasevisi ethu. Kubalulekile ukuba abe kwamasiko amabili emsebenzini imvelo, ngoba ivumela ukuthuthukiswa amacala ahlukahlukene kanye Ukuphosela acebile ngenkinga solutions.
Abantu abane umehluko yasemuva kwamasiko, ngokuvamile, babe amamodeli ezahlukene zengqondo kanye izindlela ezahlukene ekuxazululeni izinkinga, okuyinto kwakha engahle kakhulu emsebenzini team kanye nemiphumela.
Futhi, kuyasiza ukugwema ukungaqondi kahle, lapho besebenzelana nezindaba ethile, mayelana umkhiqizo noma umsebenzi onganelisekile izidingo amaklayenti 'ababehlala endaweni ethile, noma izwe.
Yesibili Isici uhlobene ne ibhizinisi emhlabeni jikelele.
Kwezici kwamasiko ezidinga kuqokonyiswe yilezi: protocol, inkolo, ukusetshenziswa imibala kanye nencazelo yabo, ulimi ukhoporali, amasiko ukudla nezipho.
Nakhu, futhi, esinye umbono mayelana namasiko ehlukene, ovela Geert Hofstede, futhi ihlaziya Ubukhulu Cultural. Kunjalo: Power Distance Index, Komuntu, Ababhekwa, Ukungaqiniseki kuxoxwe ngeSivumelwano Sokuvikela Ukukhokhiswa Index and Long Term Orientation. Ungomunye ukusetshenziswa kungenzeka of indlela yakhe ncamashi in Amabhizinisi International. I score of inqwaba lamazwe luyatholakala kwi web site yakhe.
Amabhizinisi kukhona amabhizinisi kanye izimiso zokuhle kukhona izimiso zokuhle. Le ndawo gray ukuthi abantu abaningi azame ukuthuthukisa, futhi usebenzise njengoba ibhaxa ukwehluleka noma ukuvumela noma vumela engamukeleki yokuziphatha zokuziphatha noma izimo, akumele akhona.
A musho omkhulu kusukela Peter Drucker kwaba, lapho intatheli embuza ukuthi yini uyofundisa in a inkulumo, mayelana Ethics. Yena waphendula ngokuthi kuyoba nguye olufushane emhlabeni, sizokwenza nje ngithi: "Uma ungakwazi ukubuka uzibone esibukweni ngokuthile uku mayelana ukwenza, musa ukukwenza. "
Lezimilo mayelana zokuziphatha, hhayi kumkhathaze umonakalo ubani, yebhizinisi, imvelo, Uzakwabo, umlingani, umakhelwane, umngani, njalo njalo.
A Umqondo ovamile wokuthi Ngafunda okuningi, Siwukuthi ukufumbathisa kulindeleke futhi evamile kwamanye amazwe. Ukufumbathisa akulungile nomaphi yomhlaba. Kunzima kimi, ukukholelwa ukuthi kukhona abantu abathile, Abantu sína, ukuthi lisekela ukuthi mkhuba futhi bathi ukuthi kungokwemvelo kwezinye izindawo.
Khona ukufumbathisa, kudingeka sibe Izıhlabane lokungenani letimbili, lowo "enikela 'futhi owamukelayo, kwenzekani kwaba inqubo eside nabadala, lapho izinzuzo ezinamandla ahlinzekwa, izipho isifumbathiso ukuze babe izithakazelo zabo ababa khona masinyane, nokuthi nqubo kwezinye izifunda emhlabeni baba evamile ngaphezulu. Kulula ukuthenga le nsizwa kunokuba ukuchaza lokho Ngifuna.
In 1999, Ngafunda on iphephandaba lendawo, noma umagazini, an kungazwakali, kunzima ukukholelwa, kodwa kuyinto engokoqobo futhi ngicabanga ukuthi enginalo kuze namuhla ukuthi sihloko endaweni ezithile. A ohlakaniphile ovela ezweni elithuthukile uthe, in an lizwe abasafufusa, futhi kulotshiwe, into efana: "Onalo imali yenza oda". Ngicabanga ukuthi angilindele kudingeka enze imibono okwengeziwe ngendlela ukufumbathisa sanwetshwa kwezinye izifunda.
Elinye iphuzu ngifunde, kuba ukuthi izwe ngalinye kwenza nekutolika amabhizinisi amazinga abo zokuziphatha. Ngikholelwa ukuthi kuyinto, futhi, hhayi kuyiqiniso. Izwe ngalinye has a level of 'inkohlakalo ukungcola ", ukuthi kufanele kube inkomba. an observation, inkohlakalo akuyona nje isici amazwe ampofu. Sithola it, futhi, emazweni athuthukile, futhi njalo.
Ngakho, Lezimilo into eyodwa, imithetho yamabhizinisi kanye nezici zamasiko kukhona esinye.
Izici zamasiko, nendlela yokubhekana particularities zabo, kuncike cwaningo kanye isithakazelo ngamunye ukuthi ufuna kutfutfukisa amabhizinisi ngamazwe, futhi kuyadingeka ngaphambi kokwenza suppositions ngalokhu futhi ukuphathisa ukuthi kungumsebenzi ukungezwani zokuziphatha.
Ukubulala, ukweba kanye ukulimaza abanye akuzona a nokuziphatha yokuziphatha eyamukelekayo kunoma iyiphi indawo emhlabeni. Imithetho yebhizinisi kwenziwa yi-abantu, futhi walandela ngendlela yokuziphatha noma zokuziphatha okubi, njengoba unembeza wabo kanye nemfundo ithi.
Entrepreneurship Week Global →